I-Lakefront Horizons Resort Jindabyne
Iyunithi yokubuka yechibi elizilawulayo e-Horizons resort ngengxenyana yezintengo ezijwayelekile!! Kufaka elakho ikhishi nelondolo kanye nevulandi eshiswe yilanga kanye nezici zokungcebeleka ezifana nedamu lokubhukuda elishisayo nenkundla yethenisi!
Leli yifulethi elizilawulayo e-Horizons elicishe lifane naleli ebesiliqasha ngempumelelo ku-airBnB. Sicela uhlole enye uma izinsuku ozifunayo zingatholakali kulena. Zombili zithandeka ngokufanayo.
Iyunithi yethu yesitudiyo ku-block 1 ibheke ichibi nezintaba. Iyunithi ifaka ikhishi elisebenza ngokugcwele elinomshini wokuwasha izitsha kanye nelondolo yangaphakathi, isiphephetha-moya/ukushisisa nokubukwa okumangalisayo.
Inesikhala semoto esabiwe endaweni yokupaka izimoto engaphansi futhi kukhona nesikhala sesikebhe ehlobo. I-Horizons resort isebenzisa inqubomgomo lapho ungakwazi ukupaka kunoma iyiphi indawo etholakalayo.
Iyunithi yethu isilungisiwe, ine-LCD TV enkulu, futhi uyakwazi ukufinyelela ezindaweni zokungcebeleka okuhlanganisa ichibi elihle elishisayo elingaphakathi (lamahhala), inkundla yethenisi (yamahhala), imassage & ubuhle, indawo yokucima ukoma nezindawo zokudlela. Isisekelo esihle sokushushuluza, imisebenzi yechibi, ukuqwala izintaba, ukuvakasha noma ukuphumula. Isikhungo sezitolo esikhulu kunazo zonke saseJindabyne, iNuggets Crossing, sinqamula umgwaqo. Kuhlanganisa nesitolo esikhulu sakwa-Woolworths esinenani elifanele, ukudla okuya kude nezindawo zokudlela kanye nesinema. Kukhona nokufinyelela okulula kusuka kuyunithi yethu ukuhamba ngendlela egudle unqenqema lweLake.
Indawo yokulala ingumbhede owodwa kaQueen kanye nombhede ophindwe kabili kasofa owodwa. Ilineni namathawula anikeziwe.
Amanani ethu ashibhe kakhulu kunokubhukha ngokusebenzisa iphuli yokuqasha abaphathi futhi uqinisekisiwe iyunithi enakekelwa kahle enokubukwa kwechibi!
Amanani acishe abe ngu-$99 ubusuku ngabunye ngaphandle kwesizini yokushushuluza kanye no-$119/$129 ngoKhisimusi/Ngonyaka Omusha nangePhasika. Izintengo zesizini ye-Ski zingu-$139 nje ngobusuku ngabunye noma ngaphansi ngo-June no-September kufika eqophelweni eliphezulu elingu-$259 ngamaholide esikole e-NSW. Abantu abengeziwe bangama-$8 kuphela
umuntu ngamunye ngobusuku kubantu abangaphezu kwababili
4.68 ·296 okushiwo abanye
4.68 out of 5 stars from 296 reviews
4.68 · 296 okushiwo abanye
Asihlali eJindabyne kodwa sinikeza iziyalezo zokuthatha okhiye ebhokisini lokukhiya endaweni yethu yokuhlanza, imiyalelo yokufika neziphakamiso zezinto okufanele zenziwe, futhi sinikeza izinombolo zethu zocingo kanye nenombolo yethu yokuhlanza uma kunesimo esiphuthumayo.
Asihlali eJindabyne kodwa sinikeza iziyalezo zokuthatha okhiye ebhokisini lokukhiya endaweni yethu yokuhlanza, imiyalelo yokufika neziphakamiso zezinto okufanele zenziwe, futhi sin…